FAQs - China Kanaif TAPAKA FANTSONA Systerm Ltd
Manana ny orinasa amin'ny 20 taona famokarana traikefa. Afaka manome ny tsara kokoa noho ny hafa vidiny orinasa ara-barotra.
Ny orinasa afaka fanondranana 30000 taonina / taona.
Manana ekipa matihanina fikarohana ara-teknika. Manana traikefa 20 taona.
Raha manana fepetra manokana momba ny vokatra, dia afaka hanampy anao hamaha ny olana.
Tsara hamidy service
Varotra isika rehefa manome asa fanompoana ho anao.
Products in tahiry, dia haka 15 andro ny fanaterana. Standard fotoana fanaterana ny 30-45 andro.
High asa mahomby
Ho foana hamantatra ny tsara indrindra, no mamaly anao ao anatin'ny 12 ora.
mora volavolaina Iron
Ny vy dia ny faharoa metaly fahita indrindra eto an-tany. Izany no ampiasaina mba hahatonga ny zava-drehetra avy amin'ny bala ary vatana ny sambo goavana ny haingon-trano fitenenan-dratsy eo anoloan'ny trano dingana iray. Mora volavolaina vy dia endriky ny vy bato izay moa no moramora kokoa T ...